Qabsashada CO2 ayaa lagama maarmaan u ah yareynta qiiqa lagu sii daayo qiiqa | Cusbooneysiinta Cagaaran
Qabsashada CO2 ayaa lagama maarmaan u ah yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo
Jarmal Portillo | | Qabso co2
Si loo gaaro ujeedada ugu weyn ee Heshiiska Paris ee ah inaan la kordhin celceliska heerkulka adduunka ee ka sarreeya laba darajo, waa lagama maarmaan qabsadaan wax badan oo ka mid ah CO2 ay sii daayaan dhirta kuwaas oo guba shidaalka shidaalka si ay u dhaliyaan tamar.
Ujeeddadu waa xasilinta meeraha waana inaan gacan ka geysanaa oo keliya yareynta qiiqa, laakiin sidoo kale inaan qabsanno oo ka saarno wareegga kaarboonka. Sideed ugu talagashay inaad kuqabsato CO2?
1 Qabashada CO2 iyo Edward Rubin
2 Xalka qiiqa gaaska
3 Baahida sharci
Qabashada CO2 iyo Edward Rubin
Edward rubin waa mid kamid ah khubarada hormoodka ka ah qabashada CO2. Intii uu ku guda jiray xirfadiisa wuxuu inta badan naftiisa u huray sidii uu u baari lahaa qabashada, gaadiidka iyo keydinta CO2 ee ay soo saareen warshadaha tamarta kul kulleej ee Jaamacadda Carnegie Mellon (USA). Waad ku mahadsan tahay aqoontiisa ballaaran, wuxuu hogaaminayay qaybtan cilmi baarista dhammaan warbixinnada ay soo saartay IPCC.
Rubin wuxuu u maleynayaa in inta badan moodooyinka cimilada ee tilmaamaya xaaladaha mustaqbalka meeraheenna aysan ka fikirin dhimista degdegga ah ee qiiqa, sida kan waddammada ay soo jeediyeen in lagu sameeyo Heshiiskii Paris, iyada oo aan la qabsan oo la keydin cilmiga dhulka ee CO2.
Suuragal maaha in si dhakhso leh loo yareeyo qiiqa qiiqa maaddaama u guuritaanka tamarta ee dib-u-cusbooneysiintu uu socdo Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la qabto CO2 la sii daayay.
Xalka qiiqa gaaska
Maaddaama aysan sahlaneyn in la joojiyo isticmaalka dhuxusha iyo saliidda, iyo dib-u-cusboonaysiinta ugu caansan sida dabaysha iyo qoraxda ayaa si xawli leh u soo koraya laakiin aan ku filnayn, suurtagal maahan in la gaaro hoos u dhac 2% ah CO80 bartamihii qarniga iyada oo aan CO2 laga qabsan jawiga.
“Waxaan ku nool nahay adduunyo la qabatimay shidaalka shidaalka, halkaas oo ay aad u adag tahay in bulshada laga fogeeyo iyada oo ay jirto darnaanta isbeddelka cimilada,” ayuu yiri Rubin.
Aqoonta sayniska ee ku saabsan CO2 iyo meertadiisa nololeed ayaa horumarsan oo ku filan si loo horumariyo loona hirgeliyo farsamooyin ka caawiya qabashada, gaadiidka iyo keydinta CO2. Kaliya sidan ayaa lagu yareyn karaa tirada badan ee CO2 ee ku jirta jawiga hadda. Waa lagama maarmaan, in qorshayaashan la hirgeliyo, in maalgashiga ku saabsan qabashada CO2 lagu xakameeyo xeerar.
"Toban sano ka hor maalgashiyada qaar ayaa horay loo sameeyay, maaddaama ay shirkaduhu u maleeyeen in ay u baahan doonaan dadaallada ku habboon si looga fogaado wasakheynta, laakiin isla markii rajadii laga qabay in tallaabo adag oo siyaasadeed laga qaado arrintan ay dhammaato, ayay joojiyeen maal-gashigoodii", .
Maalgashiyadii la sameeyay waxaa ka mid ah, qaar iyaga ka mid ah lagu dilay Spain. Komishanka Yurub wuxuu gudoonsiiyay 180 milyan oo yuuro mashruuc qabashada iyo keydinta CO2 ee Compostilla, warshadda Endesa oo ku taal Cubillos de Sil (León), oo la joojiyey sanadkii 2013, qayb ahaan hoos u dhaca qiimaha xuquuqda soo-saarista qiiqa ee EU.
Rubin waxay xaqiijineysaa inay lagama maarmaan tahay in la dejiyo xeerar wax ku biiriya jihada suuqyada iyo maalgashiga si ay ula shaqeeyaan qabashada CO2. Tusaale ahaan, markii uu soo baxay sharciga xakameynaya wareegga gawaarida ee sii deynaya gaasas badan, Galiyeyaal ayaa la rakibey si loo yareeyo CO2 la sii daayey.
Maaddaama ay jirto ganacsi ka dambeeya jiilka korantada, way adag tahay in lagu sharaddeeyo sahay buuxisa baahidaas sii kordheysa ee tamarta la cusbooneysiin karo. Sidoo kale arki maysid dhimista qiiqa iyada oo aanu jirin nidaam ka dambeeya.
Qabsashada CO2 waxay kaga duwan tahay tamarta dib loo cusboonaysiin karo in aysan awood u lahayn oo keliya inay dhaliso koronto, laakiin sidoo kale ay isticmaasho. Sidaa darteed, sababta kaliya ee loo qabsado CO2 waa in la ciqaabo Sharciga qiiqa CO2 ee aan haysan qabasho la socota.
Rubin wuxuu xaqiijinayaa in haddii ay arintu sidan tahay, uusan jirin caqabad cilmiyeed ama farsamo oo ka hortagi karta qabashada CO2 aduunka oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Qabso co2 » Qabsashada CO2 ayaa lagama maarmaan u ah yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo
Jahwareer weyn, halka qayb adduunka ka mid ah laga warqabo isbeddelka cimilada, Mareykanka, oo uu safka hore kaga jiro Donald Trump, wuxuu ka fogaanayaa heshiisyada caalamiga ah ee ku saabsan xakamaynta qiiqa, dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ma lahan tiknoolajiyaddii loo baahnaa ee lagu xakameyn lahaa qiiqa wax ku oolka ah. , Wadamada horumaray waxay iibsadaan kootada qiiqa ee wadamada saboolka ah, maxaa yeelay waxaas oo dhan waxaa lagu soo rogay inay noolaadaan, marka maxaa la sameeyaa? halkee baynu ka galaynaa tartankan waalan?